SKATEBOARD NEZVOKUDZIDZA VEHICLES, TOMORROW'S TRANSPORT - AFRIKHEPRI
Kubudisa levitation zvazviri maererano superconductivity, panofanira kuva nechimwe wakaitwa superconducting zvinhu (zvakadai somunhu chiwanikwa kuti niobium uye titanium, somuenzaniso) uye pane imwe magineti. Tinofanirawo kutonhora. Kana chiwanikwa iri anenge -200 ° C, kazhinji kuonana mura senitrogen, zvinova superconducting, kureva kuti chose anorasikirwa yayo magetsi nemishonga. The magineti levitating pakati nokuti superconductor pave remagineti vaishora kuti ari magineti ndiye Meissner kushanda. Iko kukwirira kwourefu zvinobva kune uremu uye magnetic masimba magnet.
Ichi chakawanikwa chinoshamisa chakaitwa makore zana akapfuura naKamerlingh Onnes. Uyu physistist akashandisa mercury yakakanganiswa ne helium yemvura se superconductor. Nhasi teknolojia iyi inoshanda mumichina yakawanda yeMRI kana, munyika yekutakura, pamwe neGearlev Japan chitima somuenzaniso. Pakuzorora zvakakwana, motokari iyi inogona kusvika nekukurumidza kwe580 km / h, yakakwana kuti ibatane neTokyo kuAsaka munguva isingapfuuri awa.
Japanese magnetic levitation chitima inoputsa zvinyorwa zvitsva pa590 km / h
Ichitima chemagetsi chekusimudzira magetsi cheCentral Japan Railway chakauya nekukurumidza kwe590 km / h panguva ye19 seconds panguva yechiratidzo.
Central Japan Railway Co uye JR-Maglev Magnetic Retention Train yakagadzirisa nyika itsva yepamusoro pa590 km / h. Chiitiko chakaitwa ... panguva ye19 seconds chete. Icho chinopfuura chidimbu pa 574,8 km / h cheFrench TGV, chakaita 3 April 2007. Asi pamapuranga ekare, ndezvechokwadi.
Sangano reJapan rakanga riri kuita chikamu chekuedza pakati pemaguta eUenohara neFuefuki, kumadokero kweTokyo. Akanga atoita zvinyorwa zvekare zve 581 km / h, zvakakundwa mu2003. Uye ane tariro yekusvika ku600 km / h nokukurumidza.
Mari yose yeJapan yakakura yeTGV inokosha ku65 mabhiriyoni ema euro
Lexus inopa vhidhiyo iyo yevitating skateboard yakafuridzirwa neRed to the Future
Anonyanya automaker Lexus akabudiswa mutsara wevhidhiyo Musiku manheru ane vhizimisi skateboarder Ross McGouran achishandisa skateboard yevheti kana "hoverboard," yakafuridzirwa neRakadzokera Kune Ramangwana, mune imwe skate park yakagadzirwa nokuda kwechiitiko chacho. , pedyo neBarcelona.
The hoverboard ndiyo pepuranga uyu zvishoma nezvishoma mumatope levitation aishandiswa gamba iri trilogy Back to Ramangwana, Marty McFly (reDare Michael J. Fox), kuti kubva kwenga iri pechiitiko yechipiri, rakabudiswa muna 1989 uye iyo yaanoita in ... 2015.
Superconductors yakanyirika ne nitrogen yega
Pakati Fans kwemafirimu kutungamirirwa Robert Zemeckis, nyaya rava kanosvota, sezvakaitwa shangu kuti norwonzi pachavo, uye zvose tariro hoverboard ririko zvamazvirokwazvo kuti 21 2015 October, zuva Marty McFly anofanira kuburuka 1985.
On the mavhidhiyo rakabudiswa chikamu wechiJapanese automaker Toyota pamusoro YouTube papuratifomu, unogona kuona Ross McGouran kushandisa hoverboard, magadzirirwo, akashambidzika, ane zvishoma chokuita firimu, pamusoro skate- paki pedyo Catalan guta, akaita kuti nguva uye pakusanganisirawo simbi njanji kubvumira yokuveza kuti levitate.
Nenyanzvi, chigadzirwa chacho chinoumba magnetic field inobvumira kuti ifukidze kuburikidza ne superconductors yakanyirika ne nitrogen yemvura, iyo inoita gore duku reutsi chena rakapoteredza chigadzirwa. Chirongwa chemagetsi chakaiswa mu skate park, uye sarudzo inogadzira magnetic field inofanirwa kutama, akadaro mugadziri mumashoko.
Iyi haisi nguva yokutanga vhidhiyo yemhando iyi yakaonekwa, asi kusvikira ikozvino hapana kambani yakabvumirwa yaenda kusvika pakupa muenzaniso wekushanda.
Muna March 2014, kambani, HUVr tech, yakazivisa hoverboard prototype, kutora mhando yefirimu.
A promotional video, achiratidza vanoshandisa vaivamo kuyangarara mudenga, chaiitirwa, chokuita vakakurumbira anoverengeka, kusanganisira muimbi Moby, nyanzvi skateboarder Tony Hawk kana mutambi Christopher Lloyd, uyo anotambira basa zvaakaitawo weMarty, Doc Emmett Brown, mumatatu.
Zuva rakatevera, satirical site Inonakidza kana Die yakanga yaona kuti yaiva mhombwe. Muna November ari Hendo kambani, akavapindurawo, vakazivisa kuti kubudirira pane hoverboard asi yake puranga, dzinofambiswa mana dzeraundi rinobva Motors, anokwanisa, kufanana Lexus midziyo kuti levitate pamusoro conductive hukawanika, kufanana nesimbi inotenderera ramps, achishandisa magnetic fields.
MuC2012, yaiva chigadzirwa chemotokari Mattel uyo akanga atora kopi ye hoverboard Yakadzokera Kumangwana, replica iyo ikambani yaiva neisensi asi iyo haina kubhururuka.
Hippo Water Roller kubatsira vanhu vemaruwa kutakura mvura
Tarisa Nina (2016)